बाबुरामलाई गगन थापाको कडा चेतावनी ! - Enepalese.com
बाबुरामलाई गगन थापाको कडा चेतावनी !
इनेप्लिज २०७२ माघ ५ गते १५:५८ मा प्रकाशित
अर्घाखाँची, ५ माघ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा मंगलबार निकै आक्रोशित देखिएका छन् । कांग्रेसको आगामी १३ औं महाधिवेशनको तयारीका लागि देशदौडाहमा रहेका थापा अर्घाखाँची पुगेर आक्रोशित बनेका हुन् । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति अभियानबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा एक्कासी आक्रोशित बनेका हुन् । नेपाल प्रेस यूनियन अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता थापाले नयाँ शक्तिको नाममा बाबुरामले आफूलाई दुःख दिएको आरोप लगाए । उनले चर्काे स्वरमा भने- ‘युवा नेता, बुद्धिजीविहरुसँग छलफल भइरहेको छ, सबै पार्टीका युवा नेता नयाँ शक्तिमा आउँछन भनेर बाबुरामले मेरो नाम जोडेर बदनाम गर्न खोजेका छन् । यसलाई तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दछु ।’ उनले कांग्रेसमा आफूले वर्षाैदेखि पसिना बगाएको भन्दै कांग्रेस भन्दा अरु सोच्न पनि नसक्ने बताए । बाबुरामलाई हावादारीको संज्ञा दिँदै नेता थापाले अबदेखि आफ्नो नाम नजोड्न चेतावनी दिए । ‘बाबुराम जी, तपाईंले मेरो नाम जोडेर चर्चा नकमाउनुस्, म कांग्रेस मै छु, नयाँ शक्तिमा आउने कल्पनासम्म नगर्नुस्’ चेतावनी दिँदै उनले भने । उनले १३ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने बताए । यसअघि बाबुरामले नयाँ शक्तिका अभियानमा गगन थापादेखि एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीसम्म आउन लागेको बताएका थिए ।